Imithetho emisha yokuziphatha yekhulu lama-21. Iyini imithetho esemqoka yokuziphatha evezwe ekhulwini lama-21?
Umphakathi Ukuziphatha nokuziphatha
Izwe elizungezile lishintsha njalo ngomzuzwana. Akumangalisi ukuthi ngisho namaqiniso anjalo angenakuphikwa njengemithetho yokuziphatha ayashintsha. Futhi nakuba izisekelo zokuziphatha zingashintshi, amakhodi amasha aphuma ekhodi yezwi elihle, eziningi zazo ezihlobene nokusetshenziswa kwamagajethi wanamuhla. Mayelana nemiphi imfihlo eyimfihlo yokuziphatha evezwe ekhulwini lama-21 futhi sizoxoxwa ngakho esihlokweni sethu samhlanje.
Ukubusa komthetho wekhulu lama-21 №1: Hlonipha isikhala somuntu siqu
Njengoba ukwanda kwamafoni namaphilisi, abantu abaningi bakhohlwe ukuthi kukhona abanye ababazungezile. Ozakwethu emsebenzini, abangani, abajwayele kanye nabadluli abavamile-abanasithakazelo ekuxoxweni kwefoni yakho phambi kwabo. Ngaphezu kwalokho, izingxoxo eziningi zabantu ezihamba phambili eziphathekayo zicasuliwe ngenhliziyo futhi zithathwa iningi njengokungenelela esikhaleni somuntu siqu. Ngakho-ke, gwema izingcingo ezinkulu ezindaweni nezindawo zokuthutha, futhi izingcingo ezingabanjwanga, uma kunokwenzeka, zama ukuphendula wedwa. Futhi kunoma yikuphi, ungafungi futhi ungamemeza efonini phambi kwabantu abangabazi.
Umbuso wokuziphatha wekhulu lama-21 # 2: Vala amadivaysi eselula
Le nto ngokuyinhloko ibhekisela ezindaweni zomphakathi: imitapo yolwazi, i-theaters, i-cinema, izikole, izibhedlela. Njengomthetho, ezinhlanganweni ezinjalo kukhona ngisho ithebhulethi ekhethekile ebiza ukukhubaza amagajethi eselula. Ungayigodli lokhu kuvamile. Uma kungenjalo, ungaziveza ngokukhanya okubi. Uma othile ekhuluma ngokuzwakalayo efonini ngesikhathi senkulumo noma iseshini eduze kwakho, unganqikazi ukutshela umphathi ngakho - umsebenzi wakhe ukulawula izimo ezinjalo.
Isimiso somthetho wekhulu lama-21 # 3: Faka umkhawulo wamagadabha wezingane zakho
Qiniseka ukuthi uhlela ukusetshenziswa kwefoni kwengane yakho. Isibonelo, akukho sms namakholi ngenkathi bedla, izifundo, umsebenzi wesikole. Okufanayo kuya kwezinye izigajethi. Ngokuyinhloko, ukusebenzisa mahhala kwe-laptop noma ithebhulethi akufanele kudlule amahora angu-1-2 ngosuku. Futhi, ungavumeli ingane yakho ukuthi ithathe amadivayisi kagesi uma ivinjelwe esikoleni.
Umthetho Wokuziphatha Ekhulwini Lama-21 # 4: Unganqumi imibuzo ebalulekile kuyi-intanethi noma ngocingo
Ngisho noma ungathandeki kakhulu ngengxoxo ezayo, ungayivumeli ukuba ihambe ngocingo noma nakakhulu nakakhulu, yenziwa ngendlela e-mail. Yonke imibuzo ebalulekile, izinkinga kanye nezihloko ezibalulekile kufanele zixoxwe ngomuntu. Okuhlukile kuphela kungaba izingxoxo zebhizinisi nabalingani abavela phesheya.
Ukubusa kwemikhuba yekhulu lama-21 №5: Yenza ukukhulumisana okubukhoma okubalulekile
Nika njalo ukukhetha kokuxhumana okubukhoma, hhayi okwangempela. Emhlanganweni womuntu nomuntu, qiniseka ukuthi udlulisela ifoni kwimodi yokudlidliza noma uyiqede ngokuphelele. Ungabambeli igajethi ezandleni zakho noma etafuleni. Ungaboni imeyili, imilayezo ekuxhumaneni nomphakathi kanye nezindaba zakamuva - ukhohlwe ngesikhathi sezwe le-elekthronikhi. Qaphela konke okushiwo yi-interlocutor futhi uhlanganyele ngokuhlanganyela kulokho okwenzekayo. Sebenzisa noma yimuphi ithuba lokuxhumana ubuso nobuso. Khumbula ukuthi akukho okubaluleke ngaphezu kokuxhumana okubukhoma nokuxhumana okusebenzayo nabangani nabantu abaseduze.
Nazi ezinye imithetho elula yokuziphatha ekhulwini lama-21. Hlonipha labo abaseduze nawe!
Sebenzisa ngokufanele ukudla nokuphuza
Imithetho yokuziphatha phakathi kwengxoxo
Ingabe sidinga ukuziphatha nge-intanethi, noma i-Skype "i-ICQ" ayiyena umngane?
Amathiphu amahle kakhulu kuma-ruble angu-525: udwebe imicibisholo njengomculi wokwenza!
Yiziphi izinguquko emantombazane ngesikhathi sokukhulelwa?
Okufanele ukwenze uma ungafuni ukuhlala
Indlela yokulungisa i-rose ebusika
Izitayela zezintandokazi zezinwele
Indlela yokuthuthukisa ingane ehlobo: imithetho emithathu yokuphumula ehlobo
Iklabishi inkukhu kanye namabele
Izimpawu zokuzikhohlisa nokuthi ungaba kanjani u-naive kancane namadoda